HomeWararka CaalamkaMiyuu Ruushka Bilaabidoona Dagaalka saddexaad ee aduunka
January 21, 2022 Wararka Caalamka, Wararka Maanta 0
Ruushku wuxuu bilaabay inuu ciidamo u diro Belarus si ay u sameeyaan dhoolatus milatari oo wadajir ah. Laakin Lithuania ayaa ku qanacsan in xoogaggu ay dhab ahaantii damacsan yihiin inay kordhiyaan cadaadiska Ukraine, iyadoo ay sii kordheyso xiisadda u dhexeysa Moscow oo dhinac ah iyo Kiev iyo reer Galbeedka oo dhinaca kale ah, sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday TV-ga Sweden.
Sida warbixinta lagu sheegay Ukraine ayaa qayb ahaan lagu qanciyay in ciidamada Ruushka ay ujeedadoodu tahay inay kordhiyaan cadaadiska Ukraine ayna khatar dheeraad ah ku yihiin ammaanka Ukraine. Wasiirka Difaaca Lithuania ayaa soo baxay, isagoo tixgelinaya in joogitaankan militari ee sii kordhaya ee Belarus ee dhanka Ruushka uu sidoo kale ka dhigan yahay mid khatar ku ah amniga Lithuania.
Siyaasiyiinta dalkaas ayaa tilmaamay in arrimahan ay dhibaato ku yihiin dalka Lithuania. Iyadoo la fahamsan yahay in xaaladda Lithuania ay ka duwan tahay Ukraine, marka loo eego inay xubin ka tahay NATO.
Sida Xaalada Tahay Dagaalka Saddexaad ee Aduunka ayaa Laga Cabsi qabaa.